Igumbi elinye labucala-Embindini weOxford - I-Airbnb
Igumbi elinye labucala-Embindini weOxford
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguDanish
Igumbi elipholileyo kwaye elikhulu kwindawo ezolileyo yi-20-25 imizuzu yokuhamba ukusuka kumbindi wesixeko. Indlu esanda kulungiswa kwaye ibandakanya itafile yokutyela kwindawo yokutyela - umfanekiso uncanyathiselwe. Ukungena okuguquguqukayo, indawo yokupaka yasimahla kwindlela yokuqhuba kunye namakhonkco ezothutho. Isiseko esihle kakhulu sokufumana imbali, umtsalane kunye nendalo yesi sixeko simangalisayo siyabonelela !!!
Sibhetyebhetye kakhulu malunga namaxesha okungena nangaliphi na ixesha phakathi kwe-12 pm - 12 am. Ngenxa yeenkonzo zethu zokucoca ixesha lokuphuma likhethwa phambi ko-11 am.
Sinamagumbi amabini afumanekayo angatshatanga & amagumbi amabini okulala umntu okanye kunye (bona uluhlu olwahlukileyo), ikhabethe enye kwigumbi ngalinye, igumbi eliluncedo kunye nendawo yokutyela enetafile yokutyela.
Ikhaya lam elithandekayo lisembindini wesixeko, malunga neYunivesithi yaseOxford Brookes eseHeadington Oxford. Indawo ithule kakhulu kwaye ingaphakathi komgama wokuhamba weZiko leSixeko (imizuzu eyi-20-25), iYunivesithi yaseOxford / iBrookes (umzuzu o-1), iSibhedlele saseChurchill (imizuzu emi-5 yokuhamba), isibhedlele saseNuffield (imizuzu eyi-15 yokuhamba), iCowley Road (imizuzu eyi-15). ), kunye neSibhedlele sikaJohn Radcliffe (imizuzu engama-20). Sisiseko esihle kakhulu sokufumanisa imbali kunye nezinto ezinomtsalane zonikezelo lwesixeko esimangalisayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Danish
Ndiza kukwamkela ekhaya kwaye ndikubonise igumbi kunye nezixhobo. Ukuba ndiyakukhumbula xa ungenile, ndizokubona kamva ekhaya. Ndinolwazi olululo ngesixeko sam esihle ke ngoko ndiyakuvuyela ukukunika naziphi na iingcebiso kunye neengcebiso ukuba ufuna ndikwenze
Ndiza kukwamkela ekhaya kwaye ndikubonise igumbi kunye nezixhobo. Ukuba ndiyakukhumbula xa ungenile, ndizokubona kamva ekhaya. Ndinolwazi olululo ngesixeko sam esihle ke ngoko ndiy…